Ka shaqeynta shirkadda Presto Automation maahan oo kaliya shaqo, waa xirfad run ah.
Dhaqanka ka jira Presto Automation waa mid hal abuur leh oo taageeraya. Cusbooneysiin - maxaa yeelay waxaan bixinnaa qalabka ugu fiican iyo teknolojiyaddii ugu dambeysay ee warshadaha si aan u taageerno koritaankaaga iyo horumarkaaga. Kaalmo - maxaa yeelay ka shaqeynta shirkadda 'Presto Automation' waxay kuu oggolaaneysaa inaad isku dheellitirto xirfaddaada iyo nolosha gurigaaga.
Waxaan ku abuureynaa kuna horumarin karnaa geedi socodka wax soo saar heer caalami ah Presto Automation maxaa yeelay waxaan heysanaa dad waa weyn oo wax walba ka dhiga. Waxaa intaa sii dheer, xarumaheena casriga ah, nadiifka ah, iyo kuwa hufan ayaa ka go'an wixii ka badan inta caadiga ah ee laga filayo jawiga wax soo saarka.
Miyaad ka fekereysaa xirfad ku saabsan deegaanka wax soo saarka? Fadlan waxoogaa daqiiqad ah ka fiiri liistadayada boosaska bannaan ee hoose, oo si xor ah u codso haddii aad u malaynayso inaad buuxisay shuruudaha shaqada.
Otomatiga 'Presto Automation' waa loo shaqeeye loo simanyahay fursado, oo bixiya magdhawga tartanka, shaqo xasiloonida, faa'iidooyinka, iyo helitaanka ceymiska bulshada ee musharaxa saxda ah.
Injineer wax soo saar
Injineerka Xakamaynta Korantada
Magaca Shirkadda: Qalabaynta Presto
Nooca Shaqada: Waqti buuxa
Mawqifkani wuxuu mas'uul ka yahay bixinta taageero farsamo ee habka wax soosaarka iyadoo la adeegsanayo cilad bixinta dayactirka iyo hagaajinta qalabka. Nidaamyada lagu daro laakiin aan ku xaddidnayn nidaamyada kululaynta, makiinadaha wax lagu duubo, qalabka wax lagu rido ee cadaadiska hooseeya & foornooyinka wax lagu baro Nidaamyada waxaa ka mid noqon doona haydarooliga, pneumatics, nidaamyada mootada lagu wado, iyo sidoo kale qeybaha korantada ee aasaasiga ah. Intaa waxaa sii dheer, booskani wuxuu mas'uul ka noqon doonaa sameynta dayactir yar oo ku saabsan qalabka ridaya caaryada iyo qaybaha. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la akhriyo lana fahmo naqshadaha, buugaagta, iyo tilmaamaha injineernimada ee ku saabsan shaqada iyo hawlgalka nidaam kasta.
Waajibaadka & Waajibaadka:
Akhriso, fahanto raacna daabacadaha injineernimada, iyo dukumiintiyada si loo gaadho isku imaatinka, dayactirka ama hagaajinta qaybaha iyo qalabka
Leh aqoon iyo xirfado lagu ilaaliyo laguna dayactiro aaladaha iyo agabyada agab ee ku jira qeexidda naqshadeynta
Dayactir iyo dayactir qeybaha farsamada sida hydraulics, pneumatics, matoorrada lagu kaxeeyo matoorrada, iyo qeybaha korantada aasaasiga ah.
Tijaabi oo cilad-saar mashiinnada si loo hubiyo shaqeyn habboon
Caawinta dayactirka heer qanacsan oo tayo iyo hufnaan ku jira qaybaha la soo saaray
Qabso dhammaan waajibaadka kale, sida laguu igmaday
Loo heli karaa saacado dheeraad ah iyo wicitaanno saacado kadib ah
Xirfadaha & Shuruudaha:
Attitude Dabeecad wanaagsan iyo ciyaartoy kooxeed
3-5 sano oo waayo-aragnimo dhow ah oo ku saabsan dayactirka iyo hagaajinta qalabka iyo nidaamyada mashiinka iyo qalabka mashiinka
Khibrad u leh isku-duwidda mashiinka aasaasiga ah, qalabaynta mashiinka la dejiyay iyo cilad-bixinta
Aqoonta mashiinada aasaasiga ah ee qaybaha iyadoo la adeegsanayo makiinado, qalabka wax lagu qodo, lathes iyo mashiinka wax lagu shiido, iwm.
Ability Awoodda aasaasiga ah ee akhriska iyo tarjumaadda daabacadaha buluuga ah, farsamooyinka iyo sawirrada injineernimada
Aqoonta haydaroolka, qalabka mashiinka caaryada pneumatics iyo qaybaha korantada aasaasiga ah
● Waa inuu leeyahay qalab u gaar ah
Awood u leedahay in aad qabato shaqada wax soo saarka iyo dhirta la shirayo
Standing Joogto noqosho, wax qaadid, iyo ku lugeyn cimilo kala duwan, qabow iyo kulayl.
Aqoon Gaara, Ruqsadaha, Shahaadooyinka, IWM:
● GED ama Dibloomada Dugsiga Sare Waa Loo Baahan Yahay
Dhammaystirka barnaamijka tababarka ama iskuulka xirfadda ee farsamada makaanikada ama wixii la mid ah
Combination Isku-darka waxbarasho iyo khibrad u dhiganta
Ku saabsan Qalabka Presto
● Waxaan nahay Loo shaqeeye Fursado Loo Siman Yahay (EOE)
Waxaan u baahanahay kiro cusub oo ah baaritaanka mukhaadaraadka iyo aalkolada
● Waxaan ubaahanahay shaqaalayn kahor iyo baaritaano dhab ah
Compensation Magdhawga tartanka, shaqaalaynta manfacyada
Shirkadda 'Presto Automation' waxay raadineysaa Farsamo yaqaan Koontaroolidda Korantada, oo mas'uul ka ah dhismaha iyo horumarinta nidaamyada xakamaynta iyo sidoo kale dayactirka / xallinta dhibaatooyinka soosaarayaasha iyo qalabka isku-dhafka badan.
Kani waa jawiga wareega ee habeenkii - 5 maalmood, MF, Saacadaha jiifka ah ee la go'aaminayo.
● Dhis iyo horumarin qalab otomaatig ah oo heerar kala duwanaan ah oo kala duwan
Joogtee howlaha badbaadada ee qalabka cusub iyo kan hadda jira
Iliar Aqoon u lahaanshaha barnaamijyada xakamaynta dhaqdhaqaaqa iyo horumarinta HMI
Ho Cilad bixinta korantada
Skills Xirfadaha fiilooyinka
Awood u leedahay inaad raacdo oo aad aqriso qalabka korontada
Aqoonta saddexda matoor ee kala ah, matoorrada xawaaraha is beddela, iyo koontaroolada
Aqoonta matoorrada adeegga iyo matoorrada steppers
Naqshadeynta korantada iyo dhismaha nidaamyada kontaroolka otomaatiga ah
Aqoonta dareemayaasha magnetic, ultrasonic, capacitive, iyo fiber optic
Aqoonta xakamaynta amniga oo ay ku jiraan daahyada iftiinka iyo aaladda leysarka
Awood u leedahay in aad xalliso mashiinnada otomaatiga ah iyo nidaamyada xakamaynta
Aqoonta barnaamijyada PLC
Aqoonta barnaamijyada HMI
Aqoonta qaabeynta ECAD
Understanding Faham aasaasi ah oof-wareenka iyo haydaroolka
5 sano oo waayo-aragnimo ah ee ugu dambeysay ee koontaroolka korantada horumarinta / barnaamijyada / dhismaha
Awood u yeelan kartaa inaad ka shaqeyso dhirta la shiray
Standing Joogto joogto ah, qaadid, iyo socod
S BS ee injineernimada korantada ama shahaadada kale ee laxiriirta ee loo baahan yahay
● Waxaan ubaahanahay shaqaalayn kahor iyo baaritaanka asalka
Compensation Magdhawga tartanka, shaqo sugid leh macaashka